Namuhla akusona isimanga ezintsha zokwakha. Unyaka ngamunye, ochwepheshe oluqalisa uhlobo oluthile eseyintsha. Muva nje, futhi embonini yezokwakha, kakhulu, zonke sikhuluma isidingo imikhiqizo imvelo. Umphumela waba yini eside ukufika. ochwepheshe Russian ishicilele engabizi kuqhathaniswa futhi ngesikhathi esifanayo impahla eyizingqabavu okungahambisani sonakalise indalo. Kuyinto isitini lokhuni. Ubelokhu kakade iyokwazi ukuqonda nokusetshenziswa ukwakhiwa.
Brick Izinkuni: Kuyini lokhu?
Mangisho ukuthi lokhu kwakwenqatshelwe iyafana izitini ezivamile kuphela njengoba injalo kanye negama. Eqinisweni, "isihlobo" umkhiqizo ugodo, kodwa usayizi ezincane. Ngokubukeka kuba block nge izilinganiso 650x190x60 cm.
Ukuze kube lula ukusetshenziswa ezinhlangothini isitini ngasinye sivala okhethekile Iseluleki.
Ukuze wenze isitini sokhuni, isetshenziswa kuphela eliphezulu softwood. Ngo yokukhiqiza ke sibhekana imisebenzi eminingana. Okokuqala izinkuni eluhlaza eyomisiwe kuze izinkomba umswakama ungayifinyeleli 8-12%. Khona-ke, i-machining zonke izinhlangothi iyabonakala. Isigaba sokugcina - ukugaywa.
Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka yokwakha ukuthi ngeke aludingi yokuqedela ezengeziwe. Le isixazululo engabizi. Uma wakha indlu aphume amabhlogo, kuba Akusadingeki ukuba uqede olungaphambili lwesonto - ngakho sibukeka sisihle. It iyokwanela ukusebenzisa ungqimba wax njengoba ukuvikelwa imvelo futhi umswakama.
Ngaphezu osayizi ejwayelekile, ukukhiqiza kanye isitini ngabanye lokhuni. Block kungenzeka iyiphi ubukhulu njengoba oyifunayo futhi oludingekayo.
Izinzuzo ezintsha imvelo
Lapho izinto zokwakha sidaliwe, umsunguli umkhiqizo isizixazululile konke eziningi izinkinga eziba khona phakathi nenkathi umsebenzi wokwakha ukwakhiwa izindlu ezakhiwe ngokhuni.
Ngakho, indlu ezenziwe ngokhuni iminyaka eminingi - kubalulekile ukulinda kuze kube isakhiwo bome out. Khona-ke ulinde uma ngeke shwabanisa. Ngokulandelayo, ufake amafasitela nezicabha bengena. Futhi kuphela emva kwalokho abakhi ukuya imisebenzi yokuqedela. Ukusebenzisa i material amasha ezintsha, ungeqa ngokuphepha izigaba omiswe bese ukuncipha. Imvelo isakhiwo friendly ilungele ukusetshenziswa ngokushesha ngemuva ukwakhiwa.
Ngaphezu kwalokho, amabhlogo izinkuni kungukuthi zikhubazekile phakathi kwenqubo omiswe - banayo Ubukhulu ezincane. Ngenxa yalokhu enkulu-ke unawo ukuma yokuqala emabhuloki, futhi imikhiqizo ngokwabo ngokuphelele axhumene. Kulokhu, ungakwazi bayakhohlwa izikhala - ungapheli.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe lokhu kokuxazulula - izindleko eliphansi ukwakhiwa, lapho kusetshenziswe izitini ezisikiwe lokhuni. kanjalo icebo eyakhelwe kakhulu ukubuyeka ngenxa yokuntuleka isidingo amasu ezibizayo sokufeza imisebenzi e lwezimpawu, usimende nesihlabathi, futhi ukungabi khona ukuhlelwa izidingo usimende. Eqolo isakhiwo kuyoba zezinsika, imiqhele. Yiqiniso, ungakwazi ukwakha kakhulu eco-indlu, futhi ngaphandle kwazo, kodwa akekho ofuna ngokuzumayo isakhiwo athuthukile. Uma ufuna ukuthola isakhiwo okuthembekile, ungasebenzisa laminated yokwakha yaseGrisi izingodo. Kuyinto ushibhile, kodwa umphumela uba yini okubi kakhulu ukwedlula yonke ikholomu.
Abaklami aziwavimbeli jikelele Usayizi kwezitini, njengoba kwaba njalo endabeni lapho isicelo izingodo noma izingodo. Ngakho, ngeziningi zezinto zokwakha kwenza kube nokwenzeka ukudala on ngesisekelo yayo, ngisho izakhi ngiyaphupha kakhulu futhi amazing yezakhiwo.
Futhi ekugcineni, intengo isitini izinkuni izikhathi eziningana aphansi ukwedlula izindleko laminated yokwakha yaseGrisi izingodo. Lena nakanjani inzuzo obalulekile.
Lokhu kwaziswa kunezinzuzo eziningi. Kodwa abathengi ezingaba kufanele bazazi nokushiyeka, okuyinto has a isitini lokhuni. Ezindaweni elinesimo sezulu elibuhlungu kungcono ukwakha indlu ngezitini ezivamile - indlu yamapulangwe Kulokhu asifanele. Kuzoba buyabanda.
Futhi hhayi Kunconywa ukwakha eliphezulu liphumele izakhiwo ekokirpicha, okuyinto libhekene endaweni enkulu - akuyona ukuzinza kunesidingo.
Ungaqali umsebenzi wokwakha ngaphandle project akhiwa Ochwepheshe abanekhono. Indlu ngeziningi zezinto zokwakha, elingenziwe iphrojekthi kungenzeka igoqe bedle ukucindezeleka ngisho omncane.
Ngokhuni izitini: ukukhiqizwa kwe izandla zabo
Isakhiwo umkhakha ochwepheshe, abakhiqizi nabaphakeli kusho izakhamuzi ngazwi linye bathi lokhu akunakwenzeka, kodwa ayikho into engenakwenzeka. Ukuze ukukhiqizwa kubalulekile abe yokugaya ephezulu ukunemba nokuthola imishini ukugaywa. Ngaphezu kwalokho, kudingeka akhethiwe ngokucophelela izinto zokusetshenziswa. Izinkuni izitini kumele ihlangabezane zaziziningi izidingo. Uma kukhona amathuba anjalo, ube ke akunandaba ngempela.
Phakathi ochwepheshe kunenkolelo yokuthi inqubo ukuzithiba kubekwa ngeziningi zezinto zokwakha futhi akakwazi ukubhekana. Njengoba lena debatable. Kunezindlela eziningana imithetho okumele ilandelwe.
Ngokwesibonelo, izitini kumele efakwe ngokuqinile poryadno. Qiniseka ukugcina poryadovkoy. Unit ibekwe ichopho lock. Ukuze zangaphakathi nezangaphandle amabhlogo lateral Ligation kunesidingo. Lokhu kwenziwa njalo amabhlogo ezintathu. Ngaphezu kwalokho, lo sigqoka kufanele kube okufanayo njengoba wokwakha uqobo. Asikwazi ukuvumela ukufana Ligation enemininingwane eluheleni. Kufanele azixoshe kuyo 0.5 isitini. Ukuze ungathola okuthembekile, eyenziwe yonke imithetho design, kanye enhle engokwemvelo ukhuni iphethini futhi odongeni ingaphakathi.
Phakathi odongeni yangaphandle futhi ungqimba kwangaphakathi ukwahlukanisa ibekwe. Ezimweni ezingavamile, ungakwazi balale kuya sawdust. Babuye zihlukaniswa izakhiwo kakhulu ukushisa ukulondolozwa.
Oveza isitini ngokhuni?
ERussia kukhona izinkampani eziningana lapho bekwi ukukhiqizwa ukwakhiwa kokuxazulula. Ngakho, izitini Petersburg, endaweni efanayo lapho ekhuphuka nge. Kuyinto kuleli dolobha, lokhu kwakwenqatshelwe sidaliwe okusekelwe "isibonelo," ngokwezwi lenkampani. Ungabona izindlu kuqala, ukwakhiwa zazo impahla yayisetshenziswa. Lezi zakhiwo Zaozerye, Zaychihino, edolobhaneni Harmony. Le nkampani inyathelisa imikhiqizo ngaphansi kwegama lomkhiqizo Woodbrick.
Enye inkampani itholakala saseTomsk. Kube ukukhiqiza imikhiqizo ephuma zikaphayini. Lo mkhiqizo kuza ngaphansi kwegama lomkhiqizo "Ekhaya Cosy". Nazi kwezitini lokhuni. Izithombe kungabonwa ngezansi.
Intengo yalezi izinto zokwakha eco-friendly lingaphansi kakhulu kunalelo Woodbrick.
Le nto has Nokho, umbono omuhle, kuphela ezifanelekela ukwakhiwa ongaphakeme liphumele. Professionals ukusho ukuthi impahla kufanelekile labo asebamukele ukuba babe indlu futhi ufuna ukuba ngaphezu kwalokho ezinye izakhiwo esakhiweni.
imininingwane ehilelekile Okwesibili - yinani. Abakhiqizi bayangabaza ukubatshela ukwaziswa okuphathelene nawo, kodwa izindleko impahla kusukela 'ekhaya ethokomele "- $ 470 for 1 cubic, kuyilapho ugongolo eliyindilinga nge usayizi ofanayo angathengwa $ 320, izingodo round futhi bonke 240. "Stinky" linikeza ukukhiqizwa grade "A" at 860 zamadola, futhi laminated yokwakha yaseGrisi amapulangwe for $ 600.
Kukhona enye inkinga, okuyinto has a isitini lokhuni. Izibuyekezo abonisa ukuphambuka esikhulu kusukela tolerances. Usayizi kumelwe ube kumakhulukhulu ngokuqinile engaguquki a milimitha, ikakhulukazi ku-sivala. Inani elikhulu evele yokuxhuma ungavula isakhiwo ku ngesihlungo, uma izikhala makhulu kakhulu. Izikhiye axhunyiwe noma nge backlash sina, noma ngesando.
izitini Ngokhuni: ubuchwepheshe ongahluziwe
udonga okunjalo lapho inala izikhala kanye ekucindezelekeni mechanical, manje noma ngokuhamba kwesikhathi aqhephukile. Ingabe namanje igebe. Kulesi ubuchwepheshe, kusekhona izinkinga eziningi ezingenziwanga ixazululwe. Namanje engakaze ngokugcwele saveza. Labo izimfanelo, okuyinto umenzi uthi ezikulezi zincwajana, kodwa kuphela ufisa kuka ngokoqobo. Nayi-ke, ezintsha isitini lokhuni. Thanda ingilazi, kungaba ngokuya ukumelana amanzi kuphela uma bonke imithetho ukufakwa kuyagcinwa.
Ubukhulu ukudoba izingwegwe, izinombolo zabo futhi izici